မတ်လအတွင်း နားထောင်ရမယ့် အယ်လ်ဘမ်များစာရင်း ထွက်ရှိလာ - Yangon Media Group
ယခုမတ်လအတွင်း အသစ်ထွက်ရှိလာမယ့် ဂီတအယ်လ် ဘမ်များစာရင်းကို Contactmusic.com က မတ် ၂ ရက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ (၁)အနေနဲ့ အိုင်းရစ်ဂီတပညာရှင် Hoizer ရဲ့ Wasteland, Baby! ကို ဖော်ပြထားပြီး မတ် ၃ ရက်မှာ ထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ စကော့လူမျိုး အဆိုတော်နဲ့ တေးရေးဆရာ ”Tom Walker”ရဲ့ ” What A Time To Be ”အယ်လ်ဘမ်ကိုတော့ နံပါတ်(၂) မှာဖော်ပြထားပြီး မတ် ၁ ရက်မှာကတည်းက ထွက်ရှိထားတဲ့ အယ်လ်ဘမ် ဖြစ်ပါတယ်။ နံပါတ် (၃)မှာတော့ မတ် ၂ ရက်မှာ ထွက်ရှိမယ့် နော်ဝေလူမျိုးအဆိုတော် ”Sigrid”ရဲ့ ”Sucker Punch” အယ်လ်ဘမ်ကို ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီးတော့ နံပါတ် (၄)အနေနဲ့ အင်္ဂလန်မှရောခ့်ဂီတ အဖွဲ့ ”Foals” ရဲ့ ” Everything Not Saved Will Be Last Part1 ” အယ်လ်ဘမ်က မတ် ၈ ရက်မှာ ထွက်မယ့်အကြောင်းနဲ့ နံပါတ်(၅)မှာ အင်္ဂလိပ်ရောခ့်အဖွဲ့ ”Sleeper” ရဲ့ ” The Modern Age ”အယ်လ်ဘမ်ဟာ မတ် ၂၂ ရက်မှာ ထွက်မယ်ဆို တာကို ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အမေရိကန်အဆိုတော် ”Billie Eilish ”ရဲ့ ” When We all fall Asleep, Where do we go? ၊ ”အယ်လ်ဘမ်က မတ် ၂၉ ရက်မှာ ထွက်ရှိမယ့်အကြောင်းနဲ့ မြန်မာပရိသတ်နဲ့ မစိမ်းလှတဲ့ အမေရိကန်အမျိုးသမီး အဆိုတော် လာနာဒယ်ရေးရဲ့ ”Norman F***king Rock Well” အယ်လ်ဘမ်ကလည်း မတ် ၂၉ ရက်မှာပဲ ထွက်ရှိမယ့်အကြောင်းကို ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
'ရိုက်ကွင်း မန်နေဂျာတွေကို ပိုက်ဆံပေးရမှ ရုပ်ရှင်ရိုက်ရမယ် ဆိုရင် မရိုက်ဘူး' လူကြမ်း သရုပ်??
ပြည်နယ်အတွင်း ရေနံနှင့် ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှု ရပ်ဆိုင်းထားမည်ဟု အမေရိကန် ဒီမိုကရက် သမ္မတလောင်